Maitiro ekuburitsa kumusoro nzvimbo pane yako iPhone kana iPad nyore | IPhone nhau
Ungasunungura sei nzvimbo pane yako iPhone kana iPad zviri nyore
Iyi haisi nguva yakanaka yezvigadzirwa zve16GB izvo Apple zvinoramba zvichisimbirira pakutitengesa: zvinoshandiswa zvinotora nzvimbo inowedzera uye yakawanda, mafirimu ekududzira akakwirira, mavhidhiyo e4K ... Kunyangwe makuru ekugona michina dzimwe nguva anoonekwa aine ingangozara nzvimbo. Rakawanda re data rakachengetwa pachigadzirwa chedu "marara" ayo masisitimu anongobvisa pazvinenge zvichidiwa, asi dzimwe nguva tinoda kuzokwanisa kuzvichenesa pachedu. Isu ticha tsanangura maitirwo azvo nehunyanzvi hwakareruka.
Pane chero chinhu, chengetedzo ishoma uye haina kuoneka isipo, asi pane akakosha data asingakwanise kudzimwa, uye mamwe ayo anoshanda zvachose. Mafaira enguva pfupi ehurongwa kana ezvishandiso pachazvo zvakachengetedzwa kuti vakwanise kuzviwana nekukurumidza vasina kumirira kuti vadzingwe kubva padandemutande, asi kana nguva yasvika vanokwanisa kubviswa kana hurongwa hwaona zvakakodzera. MuIOS hatina chishandiso chinotibvumidza kuti tizviite nemaoko, asi ndiyo system yacho pachayo inoita kana ichiona zvakakodzera. Asi isu tinogona kumutsamwisa kuti aite saizvozvo: nekumuita kuti afunge kuti tinoda imwe nzvimbo. Tinoita sei izvozvo? Eya, kurodha pasi chinhu chinopfuura chedu chiripo chekuchengetedza.
Kuti tizive iyo iripo yekuchengetera isu tinowana maSystem> General> Kuchengeta uye iCloud uye ipapo icharatidzirwa (5,8GB mumuenzaniso wedu). Kana isu tichida kusunungura imwe nzvimbo isu tichafanirwa kutsvaga chimwe chinhu chinorema, uye hapana chiri nani kupfuura bhaisikopo senge "The Godfather", pamusoro pe8GB muhukuru. Isu tinoenda kuTunes uye tinya pakuroja iyo bhaisikopo. Ziva chokwadi nekuti sezvo iwe usina nzvimbo, kurodha pasi hakuzoitika uye nekudaro mutengo wekurenda haubhadhariswe. Tichaona meseji iyo iwe yaunoona pachiratidziri uye inotitaurira kuti hapana nzvimbo yakakwana saka haigone kutorwa pasi.
Kana isu zvino taenda kune iyo inotenderera ye iPhone yedu kana iPad tichaona kuti mamwe mapikicha ekushandisa anoita kunge akavharirwa, aine chinyorwa "Kuchenesa ..." pazasi pavo. Mushure memasekondi mashoma, kana tikazowana marongero zvakare kuti tione nzvimbo iripo tichaona kuti zvinoshamisa kuti tine nzvimbo yakawanda, zvinoenderana ne "marara" atakachengeta. Mumuenzaniso wedu isu takasunungurwa kumusoro ingangoita 5GB ne "mashiripiti art".
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Ungasunungura sei nzvimbo pane yako iPhone kana iPad zviri nyore
Yechokwadi Mujaho 3 inogadziridzwa nekuwedzera matatu matsva mota
Apple Mepu inowedzera ruzivo rwekufambisa veruzhinji muMontreal